Ajụjụ - Tanrimine Metal Support Co., Ltd.
Kedu otu esi ahọrọ bolt n'ụdị ala dị iche iche?
A ghaghị ịtụle ọdịdị ala. Ụkwụ dị nro chọrọ ka ogologo arịlịka rụọ ọrụ nke ọma. Ala dị nro na -ebute nha oghere buru ibu maka ntakịrị ntakịrị (n'ihi ntakịrị mkpọtụ na imegharị ya).
Kedu ka esi tụọ ala?
Ekwesịrị ịchacha ala nke ọma (ya bụ, gbachibidoro ya) tupu a na -egwu ala ma na -akwatu. Enwere ike ịchọ nrụzigharị oge n'oge a na-egwu ala.
Kedu otu esi ahọrọ ike dị iche iche na ike nke Bolt?
Ngwongwo ihe eji arụ ọrụ nke bootu kwesịrị ịdị mma maka ọnọdụ ala, ogologo mkpọchi na ụkpụrụ mkpọchi. Ekwesịrị ịme nnwale nnwale iji chọpụta njigide mbụ nke ihe mgbachi ọgụ.
Kedu otu esi ahọrọ efere ọkwa kwesịrị ekwesị?
Mpekere ndị dị gịrịgịrị ma ọ bụ ndị na -adịghị ike ga -emebi na obere mgbịrịgba. Mkpọchi ahụ nwekwara ike ịdọka n'ite ahụ n'oge nrụnye ma ọ bụ site n'ịgbanye ya.
Kedu otu esi enweta ọnọdụ oghere dị mma tupu ịtinye bolt ahụ?
Ekwesịrị ịsacha oghere wee nyocha ya iji hụ na mgbachi mgbachi ga -etinye nke ọma. Ọdịiche dị na dayameta oghere (n'ihi ike dị iche iche nke akwa akwa ma ọ bụ ala ekewasịsịrị oke) nwere ike ịpụta mgbanwe dị iche iche n'ike arịlịka n'ogo dị iche iche.
Kedu ka a ga -esi kpoo ogologo oghere ogologo?
Ọ bụrụ na oghere agbachapụrụ oke mkpụmkpụ, ihe mkpuchi ahụ ga -esi na oghere pụta, efere ahụ agaghịkwa akpọtụrụ elu okwute. A ga -emebi mmebi na mgbachi ma ọ bụrụ na a nwaa ịkwọ ụgbọ ahụ n'ihu ogologo oghere ga -enye ohere. Oghere a kwesịrị ịdị ka ihe dị sentimita ole na ole ka ogologo karịa ogologo mgbịrịgba a na -eji.
Kedu ihe ga -eme mgbe oghere karịrị akarị?
Oghere oghere achọrọ maka mgbachi esemokwu bụ akụkụ kachasị mkpa nke nrụnye. Ike njide nke mgbachi ahụ na -adabere n'eziokwu na oghere ahụ pere mpe karịa dayameta nke mgbachi ahụ. Nnukwu oghere dị na dayameta mkpọchi ahụ, ọ ga -adị obere ike ijide (opekata mpe na mbụ) Enwere ike bute oghere dị ukwuu site na iji ntakịrị bit na -ezighi ezi, na -ahapụ mkpọtụ ahụ na -agba ọsọ mgbe ọ na -agbapu oghere, ala dị nro (mmejọ, gouge, wdg) .) na igwe nchara.
Kedu ihe ga -eme mgbe oghere mepere emepe?
Ọ bụrụ na nha oghere pere mpe dabere na nha esemokwu mgbe ahụ ọ ga -esi ike ịwụnye bolt. Enwere ike imechi bolt ya bụ kredit ma ọ bụ kpudo mgbe arụnyere ya. A na -ebutekarị oghere ndị na -adịchaghị mma site n'iji ibe n'ibe na/ma ọ bụ nha nha na -ezighi ezi. Ọ bụrụ na ejiri ígwè na -ejikọ ọnụ na onye na -akwụsị ma ọ bụ jackleg, dayameta oghere na -ebelata na ngbanwe ọ bụla nke nchara (omume nkịtị na -achọ ka a na -eji obere iberibe mee ihe ka mmadụ na -agbaba n'ime oghere). Site na mbelata nke ọ bụla n'ime oghere oghere, ikike arịlịka na -abawanye. Igwe eji eme ihe na -ebutekarị oghere gbagọrọ agbagọ, ekwesịrị izere ya mgbe ọ bụla enwere ike.
Olee otú ịchịkwa mbanye Times?
Maka mgbachi mgbatị ụkwụ 5 ma ọ bụ 6, nkwụsị ma ọ bụ jackleg ga -akụnye bolt n'ime oghere n'ime sekọnd 8 ruo 15. Oge mbanye a na -adabara arịlịka mbido kwụsiri ike nke stabilizer. Oge mbanye ngwa ngwa kwesịrị ịdọ aka na ntị na oke oghere buru oke ibu, yabụ na njigide mbụ nke mgbachi ahụ ga -adị oke ala. Oge ịnya ụgbọ ogologo na -egosi nha oghere pere mpe nwere ike ibute ntakịrị ihe.
Kedu otu esi ahọrọ ntakịrị?
Mpekere bọtịnụ na -abụkarị ihe ruru 2.5mm buru ibu karịa nke ha tụrụ. Bọtịnụ bọtịnụ 37mm nwere ike ịbụ 39.5mm na dayameta mgbe ọ dị ọhụrụ. Nke a dị oke oke maka esemokwu 39mm. Mpekere bọtịnụ na -eyi ngwa ngwa n'agbanyeghị, na -abawanye ikike arịlịka na ịbawanye oge ịnya ụgbọ ala. N'aka nke ọzọ, obe ma ọ bụ "X" dabara na nha stampụ na -adịkarị n'ime 0.8mm. Ha na -ejide nlele ha nke ọma mana ha na -akụda nwayọ karịa ibe bọtịnụ. Ọ kaara ha mma ịpị bọtịnụ maka nrụnye esemokwu ebe enwere ike.
Kedu ihe kpatara nrụnye perpendicular ji bụrụ ihe dị mkpa?
Ekwesịrị ịwụnye mkpọchi ka ọ dabara n'akụkụ oke okwute dị ka o kwere mee. Nke a na -eme ka mgbanaka welded dị na kọntaktị n'akụkụ niile. Mkpọchi na -adabaghị na efere ya na elu okwute ga -eme ka mgbanye mgbanaka n'otu oge nke nwere ike bute ọdịda n'oge. N'adịghị ka mkpọchi okwute ndị ọzọ, ndị na -asacha oche dị okirikiri adịghị maka idozi ya na ndị na -eme ka esemokwu sie ike.
Kedu otu esi ahọrọ ngwaọrụ ọkwọ ụgbọ ala nrụnye?
Ngwa ndị ọkwọ ụgbọ ala ga -ebufe ike dị egwu na bọọdụ n'oge nrụnye, ọ bụghị ike ntụgharị. Nke a na -emegide ọtụtụ ụdị nkwado ala ndị ọzọ. Njedebe nke onye ọkwọ ụgbọ ala ga -abụrịrị ogologo kwesịrị ekwesị iji kpọtụrụ piston drill na stopers na jacklegs (ntụgharị 41/4 "ogologo maka 7/8" hex drill steel). Njedebe mkpọtụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala dị okirikiri ka ọ ghara itinye aka na ntụgharị nke egwu ahụ. Ngwa ndị ọkwọ ụgbọ ala ga -enwerịrị ụdị njedebe kwesịrị ekwesị iji dabara na esemokwu na -ejikọtaghị ya ma na -emebi mbibi n'oge nrụnye.
Kedu ka agụmakwụkwọ dịruru mkpa?
Mmụta kwesịrị ekwesị nke ndị ọrụ na -egwupụta akụ na ndị nlekọta dị mkpa. Dika ntụgharị nke ndị ọrụ na -adịkarị na ndị na -eme mkpọtụ, agụmakwụkwọ ga na -aga n'ihu. Ndị ọrụ maara ihe ga -azọpụta ego n'ikpeazụ.
Olee mkpa nlekota anya?
A ga -enyocha nwụnye iji hụ na edobere usoro na ịdị mma. Ekwesịrị ka a na-eme nlele nnwale mgbe niile na ndị na-edozi esemokwu iji lelee ụkpụrụ arịlịka mbụ.